सााच्चै यही हो त नेपाली भाषाको परिचय ? यो संकीर्ण र विभेदमुखी चरित्रको, जड भाषा हो त ? कदापि होइन । यो त एकदमै जीवन्त, गतिशील र उदार भाषा हो । माउ भाषा संस्कृत भए पनि यसमा देशभित्र र बाहिरका, छरछिमेक र सात समुद्र पारिका समेत अनेकौं भाषाका शब्द आएका छन् र भविष्यमा त झन् बढी आउनेछन् । संस्कृतबाट आएका शब्दलाई काखमा र अन्य भाषाबाट आएका शब्दलाई पाखामा राख्नुपर्ने क्षुद्र, छुवाछुतवादी, साम्प्रदायिक मान्यता बोकेको भाषा होइन यो । समावेशिता र सबैको पहिचानलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति नेपाली भाषाको नैसर्गिक गुण हो, राज्य त भर्खर मात्र यसमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ ।
पहिलो कुरा, शतप्रतिशत उच्चारणकै आधारमा लेख्नुपर्छ र लेखिन्छ भन्नु गलत हो । भाषामा लेखन र उच्चारणका बेग्लाबेग्लै परम्परा हुन्छन् । एउटाका आधारमा अर्कालाई बिथोल्न पाइादैन । त्यसमाथि, हाम्रो उच्चारण प्रणाली त्यति बोधो र त्यति कमजोर छैन जसमा श–ष र दीर्घ इकार–उकार उच्चारण नै हुने नगरेको होस् । उदाहरणका लागि निश्छल, दुष्ट र पुस्तक शब्द उच्चारण गरी हेर्नोस्, तीन प्रकारका स अनायास बेग्लाबेग्लै किसिमले उच्चारण भइरहेको स्वयम् अनुभव गर्नुहुनेछ । जिब्रो स्वत: अलग–अलग ठाउामा ठोकिनेछ, हावाको घर्षण बेग्लाबेग्लै तवरले हुनेछ अनि अलिकति ध्यान दिनासाथ तीनवटै स को फरक व्यक्तित्व तपार्इंको कानले सहजै ठम्याउनेछ । ह्रस्व–दीर्घको मामिला झन् स्पष्ट छ । सामान्य अवस्थामा ‘चिसोचिसै छ’ भनिरहेका हामी सिरेटो चलेर काम्न थालेपछि त्यही इकारलाई दीर्घ बनाएर ‘चीसो भयो’ भन्न थालिहाल्छौं । देवकोटाको पंक्ति ‘जरूर साथी, म पागल !’ वाचन गर्नेले जरूर को रू लाई ह्रस्व उच्चारण गर्नै सक्तैन, ’cause सिंगो कविताको तेज समेटिएको त्यस पंक्तिको ओज र दम त्यही एउटा दीर्घ रू मा संकेन्द्रित छ । उच्चारण भइरहेका, सुनिइरहेका वर्ण र मात्राहरू कसैले छैनन् भनिदिंदैमा ‘शून्यमा शून्यसरी’ बिलाउने त होइनन् होला !
शब्दको अर्थ तरल हुन्छ । विषय, प्रसंग, परिस्थिति र बोल्ने–सुन्नेको मनस्थिति अनुसार शब्दले परस्परविपरीत अर्थ पनि दिन सक्छ । ‘गोरु’ ले कहिले चारखुट्टे बुझाउाछ, कहिले स्नेह त कहिले तुच्छता र गाली । शब्दको उच्चारण बहुरूपी हुन्छ, एक हदसम्म अस्थिर । देश–काल–समाज फरक पर्दा उही शब्द बेग्लाबेग्लै किसिमले उच्चरित भइरहेको हुन्छ । ‘रहेछ’ को उच्चारण रहेछ–रएछ–रछ–रैछ–रेछ जे पनि हुन सक्छ । ठोस र स्थिर त शब्दको लेखिने रूप अर्थात् हिज्जे मात्र हुन्छ । हिज्जे परम्परामा आधारित हुन्छ । यादृच्छिक । त्यहाा तर्क चल्दैन । ‘यो शब्द किन यसरी लेखिन्छ ?’ को सबैभन्दा सही र सार्वभौम जवाफ ‘’cause त्यो त्यसरी लेखिंदै आएको छ’ भन्ने मात्र हो । व्याकरणले नियम बनाइदिएका कारण शब्दको हिज्जे त्यसरी लेखिएको होइन, त्यसरी लेखिने गरिआएकाले त्यहााभित्र अन्तर्निहित नियम खोज्ने प्रयास मात्र व्याकरणले गरेको हो । त्यसैले, परम्परागत रूपमा चलिआएको हिज्जेलाई चलाउन मिल्दैन, सितिमिती कसैले चलाउादैन । देशैपिच्छे असंख्य शब्दको उच्चारण फरक फरक भए पनि सर्वत्र एउटै हिज्जेमा लेखिने गरिएकाले नै अंग्रेजीलाई विश्वभाषाका रूपमा स्थापित हुन सजिलो भएको हो । एक ठाउाको मानिसले उसको शैलीमा बोलेको अंग्रेजी अर्को ठाउाकाले भलै नबुझोस्, दुबैको अंग्रेजी लिखितम्मा त एउटै हो !
यो यस्तो भुइाफुट्टा नियम हो जसको न इतिहास छ, न वर्तमान, न त भविष्य नै । इतिहास छैन ’cause गरीब, शहर, कानून, कोशिश, शहीद जस्ता शब्द हाम्रा अग्रज लेखक–साहित्यकारहरूले शुद्ध रूपमै लेख्ने गरेका थिए । तिनकै साहित्य पढेर, त्यही हिज्जे लेखेर, त्यसैमा बानी परेर हामी हुक्र्यांै । वर्तमान छैन ’cause साढे तीन दशकदेखि राज्यको सारा शक्ति र संयन्त्र प्रयोग गरेर लागू गर्न खोज्दा पनि यो नियम लागू हुन सकेको छैन, प्रयोगकर्ताहरूले पचाउन सकेका छैनन् । लोक र समयले यसको अयोग्यता, अस्वीकार्यता स्वत: प्रमाणित गरिसकेको छ । भविष्य छैन ’cause अबको पुस्ता विवेकशील र तार्किक छ, ठोस कारण र व्यावहारिकताले चित्त नबुझेसम्म कसैले हठ गरेकै मात्र आधारमा कुनै नियम उसले स्वीकार्नेवाला छैन । न संस्कृतका शब्दलाई एउटा, अरूलाई अर्को व्यवहार भन्ने तर्क नयाा पुस्तालाई पच्नेछ, न त दुनियााभर एक प्रकारले बोलिने–सुनिने–लेखिने शब्दलाई ताल न सुरसाग बिगार्न नै ऊ तयार हुनेछ ।
One thought on “हिज्जेमा भाडभैलो”
जनक भट्ट भन्नुहुन्छ:
मार्च 27, 2012 मा 4:20 अपराह्न
कता कता नया पिढीमा नेपाली भाषा को प्रयोग गलत हुदै जादै छ …………दु:खलाग्दो कुरा !